Mayelana - INantong Global Packaging Products Co., Ltd.
Kusukela ngo-2000, iNantong Global Packaging Products Co., Ltd. ingomunye wabakhiqizi abakhulu bokupakisha kwezimonyo nokwelapha okutholakala eHaimen Nantong, esifundazweni saseJiangsu, eChina. Sinikela ngezinhlobonhlobo zemikhiqizo ejwayelekile yengilazi yokuhlobisa ukunika amandla amakhasimende ukuthi enze ngezifiso amaphakethe awo.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka amabhodlela engilazi yamakha, amabhodlela e-nail polish, i-oxidation aluminium peromume atomizer, amabhodlela kawoyela abalulekile, amabhodlela engilazi yethubhu, amakepisi epulasitiki, amakepisi e-aluminium, amaphampu, amabhodlela epulasitiki nezinhlobo eziningi ezahlukene zamabhodlela okudla neziphuzo.
Sinezimboni ezinhlanu kanye nolayini bokukhiqiza abangu-15, okukhipha nsuku zonke izingcezu ezingaphezu kwezigidi eziyi-1.5. Singakha iphakethe lakho ngawodwana, kufaka phakathi amandla wesikhunta sangasese, afaka izinsiza ezinhle kakhulu ezitholakalayo zokuhlola usilika, ukunyathela okushisayo kwegolide, ukufafaza umbala, ukufakwa kwe-asidi, isitika, ukudluliswa kokushisa, i-ect. Sikunikeza izindlela ezintsha nezinhlobonhlobo zokuhlangabezana nezinselelo zakho zokupakisha nokusabalalisa ngemiklamo eyenziwe ngezifiso. Ithimba lethu lokuklama linamakhono okubuza imibuzo efanelekile nokwethula izixazululo ezinhle kakhulu ezidingekayo ekwakhiweni kwakho ngakunye kwentengo ngentengo yokuncintisana. Sibambe isimiso "sekhwalithi yokuqala" ukwanelisa imfuneko yamakhasimende eminingi. Uhlelo lokuhlola ikhwalithi ye-Strick lungahlinzekwa. Ngamafuphi, sinikeza ngamakhasimende insiza yokumisa kanye.
Siya emihlanganweni eminingi yobuhle ehlukahlukene minyaka yonke, njengeBeautyworld eDubai, iCosmoprof Las Vegas, i-Intercharm Beauty Fair eRussia, iCosmoprof Asia e-HK, iViet Beauty eVietnam njalonjalo. Kusukela kule mibukiso, sihlangana nenqwaba yabangane abasha futhi sivumele amakhasimende amaningi ngokwengeziwe ukuthi asazi.
Njengomunye wabahlinzeki abakhulu bokupakisha nabachwepheshe abanolwazi kulo mkhakha eChina, sesivele sithumela izimpahla zethu emazweni angaphezu kwama-50 emhlabeni jikelele, njengePakistan, iRussia, iPoland, i-Argentina, iVietnam, iMalaysia, i-USA, i-UK, iGrisi, ISwitzerland ... Okuhlangenwe nakho okude kulo mkhakha kanye nezinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu kuholele inkampani yethu ezweni elaziwa umhlaba wonke.
UBeauty World Dubai Beauty Show
I-Asia Pacific Beauty Show
Umbukiso Wobuhle eLas Vegas
Umbukiso Wobuhle we-HBA
I-Intercharm Russian Show Show
Ubuhle be-Iran futhi Buhlanzekile